Moley Moolah Slot 🎰 nke Yggdrasil🔥RTP 95.74% - 429jp.info
Yggdrasil YGS Masters mmemme, na mmekorita ya na Relax Gaming, emeela ka ọmụmụ nke oghere ọhụụ ọhụrụ, Moley Moolah. Oge gboo, nke a ga-ewepụta na etiti Nọvemba, nwere mmetụta pụrụ iche nke na-adịghị ka ihe ọ bụla anyị hụburu.
Isi nke Moley Moolah
Oghere YGS Masters a anaghị ewere onwe ya nke ọma. Moley Moolah nakweere akụkọ dị mma nke ihe na-atọ ọchị na ebumnuche iji zoo ala maka ihe ntụ ọla edo. Ndị na-egwu egwu na-esonyere ahumachi ka ha gwupụta ọtụtụ nde ha site na anụ ọhịa, nnwale efu, na nnukwu mmeri. Na ise-esi anwụde na iri-akwụ ahịrị, egwuregwu nwere ike ogho a kpochapụwo Egwulegwu oghere egwuregwu ka stardom enweghị na-amụta ihe ọ bụla mgbagwoju anya n’oge a na-arụ ụgbọ.
Relax Gaming bụ onye ama ama, ama ama ama na ụwa nke bọọlụ brik na ngwa agha. Moley Moolah bụ ihe magburu onwe nwaa site na nke a egwuregwu software na-eweta ka a akara ke iGaming mpaghara site Yggdrasil mmemme.
Gwuo Moley Moolah Slot for Free – Mobile & PC
Nyochaa ogige mmadụ site na igwu ala site na mgbọrọgwụ ruo ebe ọla edo! Gwuo Moley Moolah oghere maka ezigbo ego ma ọ bụ na ngosi efu nke na-abịa n’isi nso Casinochan!
Isiokwu na Ntọala
Moley Moolah nwere ọnọdụ ya n’ogige dị jụụ n’obodo Molesworth. Ahumachi na-kenyere a obere ogige igwu site na mgbọrọgwụ ka ọlaedo ntụpọ maka ọhịa Enwee Mmeri. The oghere egwuregwu e mere na a omenala na-eche na ọ dịghị n’elu-na-elu, uche-ịfụ imewe. Moley Moolah nwere isiokwu ga-adaba na ụdị eserese 90 nke oge ochie.
Soundda nke Moley Moolah kpochapu oghere egwuregwu dịtụ mfe, na-agbaso n’usoro ọdịnala ọdịnala. Mfe dị mfe ga-abụrịrị okwu nche maka imepụta egwuregwu a. Site na onyonyo rue ụda olu, ndị egwuregwu ekwesịghị ịtụ anya ihe ọ bụla dị iche na njide na ezi uto.
Otú ọ dị, ihe oghere egwuregwu enweghị ihe karịrị n’elu imewe, ọ na-eme na mpaghara ndị ọzọ, dị ka payout.
Moley Moolah nwere RTP nke 95.74%, enwere ike iwere ya dị obere maka ụfọdụ ndị egwuregwu ejiri RTP dị elu nke egwuregwu egwuregwu ndị ọzọ. Oghere volatility a na-enye ego kachasị ụgwọ nke 6750 ugboro osisi gị (na-etinye ihe ruru $ 675,000), nke karịrị ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ụfọdụ oghere volatility dị elu site na ndị mmepe egwuregwu ndị ọzọ. Nke a nnukwu payout compensates maka akụkụ ndị ọzọ, nke a oghere egwuregwu abụghị kwa na-akpali akpali.
Nzọ nzọ kacha nta nwere ike itinye osisi sitere na 25 pound na 100 euro maka ntụgharị ọ bụla.
Egwuregwu Moley Moolah bụ ebe dị nchebe maka ndị egwuregwu hụrụ n’anya itinye ihe niile n’ihe egwu maka nnukwu mmeri na ndị ọzọ na-ahọrọ obere mmeri na obere ihe egwu. Ọ nwere kụrụ ugboro 24.89%, na-eke a na-emeri ngwakọta nke otu n’ime anọ ọ bụla akpaaka spins.
Anụ ọhịa Wild Reel na-apụta mgbe ọ bụla mgbe ihe omimi ahụ na-apụta site na akara ngosi, na-ejide kaadị na ‘ọhịa’ na ya. Njirimara a nwere ike ime na njedebe nke ntụgharị ma mee ka ahumachi mepụta oke ohia site na uzo dum. Kaosinadị, ahumachi ahụ nwere ike ịpụta ma fechaa isi ya, kama imepụta ọhịa. Nke a bụ ụgha ọhịa agba agba mma ọ bụla ọkpụkpọ kwesịrị ile anya.
N’aka nke ọzọ, njirimara Free Spin bụ otu n’ime ezigbo ego nke egwuregwu ahụ. Ọ na-triggered site atọ ikposa akara na-esi anwụde 1, 3, na 5. Player nwere ike merie ruo iri na abụọ spins na a oghere egwuregwu.
Moley Moolah nwere ike ịnweta na ekwentị mkpanaaka niile. Oghere nke oghere ahụ na-emekwa ka egwuregwu na ekwentị mkpanaaka bụrụ ahụmahụ na-akpali akpali.
Moley Moolah bụ egwuregwu dị egwu nke kpochapụla na njirimara nke Free Spins dị ka mma ya. Ọ nwere ike ịnwe usoro isiokwu ochie, mana ọ na-enye ndị egwuregwu ụzọ nzuzu iji merie. Anyị na-atụsi anya ike ịhapụ ya.
Gịnị bụ casinos ndị a ma ama gburugburu ụwa?
whеn enyi lotiri ike bọl plауing na роwеrbаll